Getaachoo Asaffaa: Osoo jiranii 'bakka hin jirretti' himatamuun maaliif? - BBC News Afaan Oromoo
Getaachoo Asaffaa: Osoo jiranii 'bakka hin jirretti' himatamuun maaliif?
9 Caamsa 2019
Hogganaa tikaa duraanii Obbo Getaachoo Asaffaa dabalatee hojjettoota Tajaajila Odeeffannoo fi Tikaa Biyyaalessaa namoota 26 irratti Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa himata banuu Kibxata darbe ibseera.
Yakka sarbama mirga namoommaa, malaammaltummaa fi aangoo seraan ala fayyadamuun kan himataman Obbo Getaachoo Asaffaa to'annoo jala hin oolle. Himatni kan irratti banames bakka hin jirretti.
Obbo Geetaachoon naannoo Tigiraay keessa akka jiran yeroo gara garaatti aanga'oonni mootummaa Federaalaa himaa turani.
Naannoo Tigiraay keessa osoo jiranii 'bakka hin jirretti' jechuun maaliif Abbaan Alangaa Federaalaa himata banuun barbaachise kan jedhu dubbii ijoo ta'eera.
Obbo Getaachoo Asaffaa eenyudha?
Itoophiyaan hogganoota waraanaafi tikaa haaraa muudde
Getaachoo Asaffaafi hojjettoonni tikaa 26 himataman
''Bakka hin jirretti''
Obbo Geetachoo bakka hin jirretti himatamuun bu'uura seeraa qaba jedhu Ogeessi seeraa Obbo Yohaannis Woldagabri'eel.
Shakkamaan tokko biyya keessa osoo jiruu qaama seera kabachiisuun qabamee akka dhiyaatu ajajamee yoo hin dhiyaatiin hafe dhimmi isaa mana murtiitti dhiyaachuu danda'a jedhu.
Himatamaan bakka hin jirretti manni murtii murtoo yoo irratti dabarse, dhimmi koo bakka ani hin jirretti ilaalamuun sirrii miti jechuun iyyata dhiyyeeffachuu danda'a jedhan.
Kun kanaan osoo jiru manni murtichaa himatamaan beekaa akkas gochuu isaa ykn akka dhiyaatu xalayaan waamichaa dhaqqabuu dhabuu isaa kan mirkaneessu taha jedhan.
Himatamaan osoo hin beekiin himanni irratti banamee murtiin dabruu isaa manni murtichaa yoo itti amane, himatamaan ragaa fi ittisa akka dhiyeeffatu ni eeyyamaaf jedhu Obbo Yohaannis.
Himatamaan bakka hin jirretti abbaan alangaa himata isaa dhiyeessuu danda'a, bakkuma inni hin jirretti murtoonis darbuu danda'a jedhan.
Himatamaan osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin garuu abukaatoo dhaabbachuu akka hin dandeenye himu.
Itti-aanaan duranii Obbo Getaachoo Asaffaa to’annoo jala oolan
Obbo Abdi irratti qorannoon dabalataa eeyyamame
Akka seera adabbii yakkaa Itoophiyaatti namni himati akka kanaa irratti baname bakka bu'insaan hordofuus hin danda'u jedhu Obbo Yohaannis.
Himata Obbo Getaachoo ilaalchisee ajajni hidhaa fi himatni yakkaa irratti baname miidiyaadhaan bal'inaan gabaafamaa waan tureef manni murtichaa isaan dhaqqabeera jechuun fudhachuu danda'a jedhan ogeessi seeraa kun.
''Naannoon Tigiraay dabarsee hin kennu''
Yakka sarbama mirga namoomaa fi malaamaltummaa guddaan kan himataman Obbo Getaachoo Asaffaa naannoon Tigiraay dabarsee hin kennu jechuu Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa kanaan dura ibsee ture.
Yeroos mootummaan Federaalaa beekamtii fi eeyyama naannoo Tigiraay malee Obbo Getaachoo seerri ittiin to'achuu danda'u jiraa gaaffii jedhu ogeessota seeraaf dhiyeessinee turre.
Labsii aangoo Manneen Murtii Federaalaa daangessuuf bahe lakk. 25/1996 keewwata 4.3 bu'uura godhachuun yakka mirga dhala namaa irra dhaqqabu kamuu kan ilaalu Mana Murtii Federaalaati.
Namni yakkaan shakkame waan fedhe haa tahu hanga yakkichi sadarkaa federaalaa jalatti kufetti mootummaan Federaalaa eeyyama qaama tokkoo malee naannoo kam iyyuu dhaqee himatamaa qabuun seeratti dhiyeessuu ni danda'a jedhu ogeessi seeraa Obbo Adii Dhaqaboo.
Manni Murtii Federaalaa yakkoota akka sarbama mirga namoomaa, yakkoota mootummoota biyya alaa irratti raawwatan, nageenya balalii qilleensa irraatti yakkoota raawwachuu malan seeratti dhiyeessuuf aangoo qabas jedhan.
Obbo Adiin akka jedhanitti namni tokko hojjetaa federaalaa tahee osoo jiruu yakka hojjeteera yoo tahe seeratti dhiyeessuuf mootummaan federaalaa eeyyama naannoo osoo isa hin barbaachisiin shakkamaa to'anoo jala oolchuus danda'a.
Obbo Getaachaw Asaffaa eessa jiru?
Obbo Getaachoo Asaffaa to'achuuf bu'uurri seeraafi heeraa maali?
Nama sarbama mirga namoomaan shakkamee himatamee fi Abbaa Alangaa Federaalaan himanni irratti baname dabarsee hin kennu jechuun heera mootummaa cabsa jedhu ogeessi seeraa biroon Obbo Eefireem Taammiraat.
Dabalataan seera adabbii yakkaa federaalaa, labsii aangoo Manneen Murtii Federaalaa daangessuuf bahee fi labsii bu'uureffama poolisii federaalaa cabsuudhas jedhu.
Naannoon Tigiraay shakkamaa Obbo Getaachoo Asaffaaf dahoo taheera jedhamuu irratti deebii ifa tahe hanga ammaatti hin kennine.
Haa tahu malee pirezidaantiin Itti Aanaa naannoo Tigiraay Dabretsiyoon G/ Mikaa'el[ PhD] hidhaa Jeneraal Kinfee Daanyaachoo fa'a balaaleffachuun ibsa kennanii ture.
Mana Murtii Yakkaa Addunyaa
ABBUT (Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay)
4 Amajjii 2019
7 Caamsa 2019
Hogganaan duraanii itti-aanaa tajaajila tikaa Obbo Yaared Zarihuun to’ataman
15 Sadaasa 2018
Obbo Abdi Mohaammad Umar irratti qorannoon dabalataa eeyyamame
28 Fuulbana 2018
Hogganaan duraanii tika biyyaalessaa Itoophiyaa Obbo Getaachaw Asaffaa eessa jiru?
23 Hagayya 2018
Obbo Getaachoo Asaffaa bu'uura seeraa kamiin dabarfamee kennamu danda'a?
3 Amajjii 2019
Meejar Jeneraal Kinfe Daanyaw: "Mindaan koo xiqqaa waan ta'eef, manni murtii abukaatoo naaf haa dhaabu"
14 Sadaasa 2018
Janaraalli Sudaan qaama olaanaa murtii dabarsu hogganuufi
Imaammatni Tiraampi lammiilee Itiyoophiyaa US jiraataniif yaaddoodhaa?
‘Maanguddoota kufan kaasuun abaarsa biyyarraa kaasuudha'
Godaantotni Itoophiyaa mana murtii Keeniyaatti dhiyaatan
Uffata shamarran maqaa 'Dabratsiyoon' jedhamuun moggaafame
Paakistaan dhimma Kaashmiir mana murtii idil-addunyaatti geessuuf
Dhiibbaan dhiigaa fayyaa sammuu miidha
Kaardinalichi murtee yakka saalaaqunnamtii irratti murame ofirraa ittisuu hin dandeenye